kuvhuraSUSE 12.2 ikozvino yavapo !!!! | Kubva kuLinux
kuvhuraSUSE 12.2 ikozvino yavapo !!!!
makubex uchiha | | Noticias
Vadiwa vashandisi, vanogadzira uye maGeekos kutenderera pasirese - kuvhuraSUSE 12.2 yakagadzirira! Imwe mwedzi miviri yekudzikamisa yakaguma mukutanga kweye stellar, izere nezvipo uye yakagadzikana, sezvo isu tese tichiida.
Iyo yazvino kuburitswa vhezheni yesimba uye inoshanduka kugoverwa kweGNU / Linux kunounza iwe discrete performance kuvandudza neinokurumidza yekuchengetedza dura muLinux 3.4 uye nekukurumidza mabasa mu glibc neQt, zvichikonzera kune yakasununguka uye inotsvedza desktop. Izvo zvivakwa zvinotsigira kuvhuraSUSE zvakachinjika kuti zvibatanidze nyowani uye zvakadaro hunyanzvi matekinoroji senge GRUB2 nePlymouth, pamwe nekutora matanho ekutanga munzira yekureruka uye yakagadziridzwa hutongi hweUNIX systemystem. Vashandisi vanozoona zvakare kuwedzerwa kwekucheka-kumucheto mashandiro ekusimudzira ruzivo rwevashandisi pane iyo yese kugovera. Iyo nyowani Btrfs fileystem inouya neyakavandudzwa kukanganisa manejimendi system uye maturusi maturusi. GNOME 3.4, iyo kuvandudza kuri kufambira mberi nekukurumidza, inopa kuvandudzwa kupuruzira kweese maficha, inosanganisira yakagadziridzwa sisitimu yekumisikidza uye manejimendi manejimendi, nepo XFCE iine yakavandudzwa application yekutsvaga basa.
«Isu tinodada nekuburitswa uku, tichichengetedza yakajairwa yepamusoro chiyero cheOpenSUSE mhando»Anodaro Andrew Wafaa weOpenSUSE Board of Directors. «Kunonoka pamusoro peiyo yakarongedzwa zuva rekuvhura nekuda kwekukura kwedu mumakore maviri apfuura zvakatimanikidza isu kushanda pakuita kuyera. Nekuburitswa uku, uye neziso rakanangana neRinouya OpenSUSE Musangano muna Gumiguru muPrague, nharaunda ine mukana uye nguva yekudzamisa basa iri.".
Nzvimbo dzinotevera dzinosanganisira shanduko dzinozivikanwa:
Kubva pane kernel kuenda kudesktop, OpenSUSE 12.2 inowedzera kumhanya kwayo: Linux 3.4 ine yekumhanyisa yekuchengetedza dura yekudzivirira kupunzika pane kuwedzerwa kukuru. glibc 2.15, raibhurari yekutanga, inovandudza mashandiro emabasa makuru kunyanya pane makumi matanhatu nemasere masisitimu. Systemd 64 inobvumidza kutanga nekukurumidza uye KDE 44 yakagadzirwa neQt 4.8.4 inopa zvirinani kudavirira kwedesktop.
OpenSUSE inosanganisa izvo zvazvino kuitika muhunyanzvi kubva kuLinux kupihwa sezvavanosvika pakukura. GRUB2 yakavakirwa mukati nekukasira, mabhaariari ari mu / usr / bin dhairekitori, uye panguva yekutanga uye kudzima Plymouth 0.8.6.1 inopa mifananidzo inokwezva neshanduro-yemahara shanduko.
GNOME 3.4 inosvitsa kutsetseka kutsetseka kune ese maapplication, akagadziridzwa masystem system, uye ari nani Maneja maneja maneja. XFCE 4.10 ine yakavandudzwa application browser uye inobvumidza yakatwasuka mapaneru. Iyo Dolphin faira maneja zvese zvakanaka uye nekukurumidza.
X.Org 1.12 inosvitsa rutsigiro rwemultitouch yekuisa michina uye nzvimbo dzakasiyana-siyana. Mozilla Firefox 14 inotsigira yazvino matekinoroji eWebhu. Llvmpipe software ndeye 3D render iyo inobvumidza Gnome Shell uye chaiwo michina kushandisa macomputer zviitiko kunyangwe pasina 3D Hardware. GIMP 2.8 uye Krita 2.4 inogadzira Yemahara yekugadzirisa mifananidzo uye iyo yakasarudzika nzira yekupenda inokwikwidza nemidziyo maturusi. Tomahawk Player anovimbisa kuti kuteerera mimhanzi pakombuta yako kuchave chiitiko chemagariro.
LibreOffice 3.5 yakagadziridza iyo Mahara hofisi suite ine yakawanda yekuwedzera uye yekuvandudza. Iyo KDE 4.8.4 tsamba uye kalendari zvinoshandiswa zvakagadzirisa kugadzikana, nepo chizvarwa chinotevera btrfs fileystem ine yakagadziriswa yekukanganisa kubata system uye zvirinani zvekudzorera maturusi.
Kernel 3.4 inobvumira kudzikisira kushandiswa kweCUU pakati pemapoka emaitiro. Iyo nyowani vhezheni yesystemd inopa yekutarisa mabasa ekuona masevhisi ari pasi pekutonga kwako, pamwe neye nyowani maitiro manejimendi ekushandisa. Sysadmins ichabatsirwa nesutu nyowani yeDhijitari Forensics / Chiitiko Chekupindura maturusi.
Iyo seti yeakakwira-chikamu maseru maturusi ekushandisa kwemasvomhu inogonesa OpenSUSE kuverenga, modhi, uye kuona. Iyo Stellarium yekuongorora nyeredzi inokutendera kuti uongorore husiku usina teresikopu. Mapurogiramu anokwanisa kunakidzwa neshanduro 1.0.2 yeGoogle Go mutauro, pamwe neazvino mafomati akaomeswa mumutauro weC ++ muGCC 4.7.1 uye Qt Musiki 2.5.
Pamusoro peiyi shanduko yehunyanzvi, timu rezvinyorwa raita kugadzirisa izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti nharaunda ibatsire kuOpenSUSE zvinyorwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvezvazvino zvitsva mu OpenSUSE 12.2, shanya: ns12.2.com.
Kutsigira uye kuvhura maitiro
Semazuva ese, iyi vhezheni ichatsigirwa kwemaviri akasunungura macircuit pamwe nemwedzi miviri. Parizvino, OpenSUSE 12.3 yakarongedzwa mukati memwedzi mitanhatu, sezvo kuburitswa kwazvino kwakanonoka maviri. Sezvo purojekiti parizvino iri kufunga zvekare huinjiniya hwayo uye maitiro ekutanga, iyi purogiramu inoenderana nekusiyana.
Shanduko dzave kuitwa muhurongwa hwekuvandudza hweOpenSUSE, mune iyo timu yekumisikidza yakaitwa ratidziro yezviito kuitira kugovera iyo yekubatanidza mutoro uye iyo Open Open Service timu yakagadzirisa iyo server purazi nemaSD uye nekushandisa pre-akaisa mifananidzo yekukurumidza kugadzirisa uye kuendesa chaiwo michina. Dzimwe shanduko sarudzo dzichaitwa panguva yeOverSUSE Summit muOrlando. Huya kune chiitiko kana iwe uchida kuita mutsauko!
Unogona kuwana iyo OpenSUSE 12.2 kurodha mifananidzo pa software.opensuse.org/122
Vashandisi vakanyatsogadzirisa Tumbleweed vanozotamira kune iyo nyowani vhezheni pasina imwezve yekuedza.
Ndokumbirawo uwedzere zvaunotaura pane peji rekushambadza pa news.opensuse.org!
hehe uyu ndiwo mupiro wangu wekutanga munharaunda KubvaLinux xD
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » kuvhuraSUSE 12.2 ikozvino yavapo !!!!
Nhau huru kune ese maSusero !!! yakakura distro, iine chinoshamisa kuita mune makumi matanhatu mabiti !!!
makubex uchiha akadaro
Vanhu xD, ndinoda akaisirwa vhezheni 12.1 uye ndikamutumira iyo Tumbleweed + currents repos uye ndine mukana wekuve nezvose zviripo uye kana vhezheni itsva ikabuda, nekungoita zipper dup, ndinogona kuva neyekupedzisira yakagadzikana vhezheni kunze kweovheni 😛 kune avo vanoda kuona kuti iyo yekuvandudza kune imwe vhezheni yakaita sei, pano ini ndinosiya izvo zvinoonekwa mune terminal nekungoita
sudo zipper zororo (gadziridza repos)
sudo zipper dup (distro kugadzirisa)
Pindura Makubex Uchiha
Izvo iwe zvaunotaura kuzvibata sekuburitswa kusunungurwa, handiti? pasina chikonzero chekudzima nekuisa iyo sisitimu yese ...
ndinopfeka fedora uye ndiri kuyedzwa kuyedza suse kana zvimwe imwe sabayon kana kahelos mhando iri kutenderera
Chinyorwa chakanaka. Mumwe mushandisi wekugovera uku anogona kundiudza maitiro azvinoita (mashandiro, kugadzikana, mapakeji, nezvimwewo) ini ndaigara ndichida kuzviedza asi ivo vakati yaive nemapakeji mashoma uye haina kuenda neyangu ati.
Mhoro shamwari, kwenguva yandave ndichiongorora iyi distro, nekuti chakanyanya kumira mushe pakachena kugadzikana ndosaka zvakatora rinenge gore kuburitsa vhezheni itsva, maererano nekuita uye kugadzikana ndiyo poindi yakasimba mune iyi xD distro asi Izvo zvese zvinoenderana nharaunda yaunosarudza, ndiyo ichave poindi yekuita, ini ndine kde 4.8.5 uye inoshanda kubva gumi, yakagadzikana kupfuura iyo vhezheni inopa, maererano nemapakeji ine huwandu hwakawanda hwesoftware uye yakagadzikana zvachose kunyangwe iwe ukashandisa Iyo Tumbleweed + currents repos ichave nemhedzisiro yakafanana neyekuyedza debian asi mutsauko ndewekuti iwe uchagara uine mapakeji kune yazvino vhezheni asi iyo yakagadzikana kwazvo, ndiko kuti, kana yakagadzikana zvakakwana, iwe unenge uine yakagadzirira kushandisa xD
Kutenda neruzivo, ini ndiri kuzoyedza zvishoma. Kuti utore dvd kuyedza xfce.
Chokwadi, ini ndinonyorera kumazwi aMakubex Uchiha. Iyo sisitimu yakasimba kwazvo uye yakasimba. Uye hachisi chokwadi zvachose kuti ine mapakeji mashoma, kutaura zvazviri, mumwedzi wapfuura ndanga ndichiyedza Kubuntu uye ndakaona kusavapo kwemapakeji aive muOpenSuse repositori. Uye kunyangwe iwe ukatsvaga chimwe chinhu chisiri muzvitoro iwe unogona kugara uchichitsvaga muOpenBuild Service (http://software.opensuse.org/122/es).
Ini handinyatso kuziva kuti chiitiko neATI chichava sei nekuti ini handina ATI magirafu, asi ndinenge ndoda kukuvimbisa kuti hauzogutsikane kana iwe uchitsvaga yakagadzikana, yakasimba, yakagadziridzwa system, uye nehombe yakawanda software inowanikwa (kuwedzera kuve neYaST, iyo nzvimbo control system muLinux nyika).
Ini ndinogona kutaura chaizvo kuti mashandiro ane ati uye gnome shell mune opensuse 12.2 yakanaka, ini handina zvichemo, ini ndinoshandisa iyo nhaka 12.6 mutyairi
Iine kde yakakwana, uye ini handisati ndaisa mutyairi ati, ndinofamba negalcium yakachena, kumba uye pabasa rega ndinoshandisa Fedora uye kubasa (ini ndiri mainjiniya muindasitiri yemidziyo) ndinoshandisa openSuse.
Ini handisi susero ... asi ndiri kuzoipa mukana uye ndiedze izvo kwemavhiki mashoma kuti ndione kuti zvinoshanda sei
Mubvunzo Ndeye rollin kana kutenderera kuburitswa?
2 o'clock, Tumbleweed ndiyo iyo Rolling, chete kana iwe uine muridzi wekutyaira [Nvidia, AMD] uchafanirwa kuidzosera iyo pese panogadziriswa tsanga.
Ndatenda, ndanga ndichida kusiya Debian / Ubuntu kwenguva yakareba uye kutora imwe distro yebhizinesi rangu uye handikwanise kusarudza pakati peFedora neOpenSuse.
edza kuvhuraSUSE zviri nyore kwazvo kushandisa
Ndakaiisa papc yangu chimwe chinhu chekare kubva mumba mangu uye kuyerera kwayo kunoshamisa. Isa iyo KDE vhezheni pane 1800MHz sempron uye 1G yekurangarira pane yekare IDE disk uye inomhanya zvakanaka. Kana ndiine nguva ndobva ndaonekana neUbuntu ndobva ndaiisa pairi!
2 o'clock isiriki, nditende
Zvakanaka… ndanga ndichiiyedza kubva nezuro nekuti ma download link anga atove mu OpenSuse forum muSpanish. Uye iyi vhezheni inochengetwa zvakanaka, ndakaisa madhiraivha eangu AMD Radeon HD 6870 mifananidzo pasina dambudziko, zvese zvinoshanda nemazvo uye mashandiro ayo neGnome (mune yangu), yakanaka. Inokurudzirwa kwazvo kuyedza kugovera uku, zvese zvemushandisi wekupedzisira zvakanyatso chengetwa.
Bhuku rangu rekunyora rakanga rakamumirira, Mint shit ... XD
Pindura kuna kuandekuera
Imwe yemugovera wakanakisa kunze uko panguva ino.
Chokwadi chakanyanya kunaka, kunyangwe ini ndichisuwa Synaptic 🙁
Kunyangwe zvakadaro Yast yacho mmuy yakanaka.
iwe unongoda kuziva yakawanda yast2.
Kugamuchirwa kune zypper
Synaptic haisi kuzo shamisa, YaST iri nani zvikuru, inyaya yekutsvaga nekuita zvese izvo YaST inogona kuita.
R @ iden akadaro
Pane chero munhu akambozviedza paPIII ine 256 ram kana yakafanana ???
Pindura kuna R @ iden
Kwete kutamba, hazvigoneke kuti ishande pane iyo Hardware ...
Ndiri kuiyedza muVirtualbox ine 444 mb yegondohwe rakaiswa muiyo KDE vhezheni uye chokwadi ndechekuti inoshanda chaizvo. Nechekutanga kugadzirisa, iyo Flash neFirefox plugin yakaiswa, ichipfuura kuenda v15. Ndakavhura Amarok ndikazvibvunza kana ndaida kuisa macodec akasiyana. Ndine firefox neAmarok yakavhurika uye zvinotambura asi zvakanaka kwazvo distro kuti ive neyakajeka, ehe, ini ndinofanira kuona kuti iyi yast - yast 2 zipper ini handizive izvozvo uye iyo console inoraira ini ndarasika hafu asi ndichitarisa muLinLuxux ini chokwadi ndinowana chimwe chinhu . Ini ndinongobata naDebian Netinstall, ini ndinosemeswa neArmed distros (Mint, ubuntu) asi iyi inoita kunge yakagadzikana, kuita kwakanaka uye kuisirwa nyore. Ndichiri padanho rekutsvaga software "yakafanana" nezvandaive nazvo mumahwindo uye chokwadi ndechekuti chinotsiva zvese zvese (ini handisi kuzoisa WINE kutamba Zera reHumambo 2) uye kunyangwe ndichi "funga" ndine huzivi hunokanda KISS SUSE Iyo inogona kuve distro yekufunga pasina kupokana.
Kana iwe uchida dhairekitori diki kuti uzive maitiro ekuita neakanyanya eOpenSuse iwe unogona kudhonza kubva pano: http://filosofialinuxera.blogspot.com/2012/09/guia-de-post-instalacion-de-opensuse.html
Kutenda CHE! Anofanira kuverenga!
Ichokwadi ndechekuti kuaverenga zvakanyanya zvekuti zvakandiita kuti ndinyatsoda kuyedza lol, uye zvakanaka ndakaiisa uye ndiri kuifarira zvakanyanya, ndichaigadzirira nzvimbo yayo pane yangu yakaomarara album kwenguva yakati naSolusos.
Kugamuchirwa kuSUSE (chikamu chekuparadzira)
Ndatenda zvikuru ping85 !!!, ndinoshamiswa nemabatiro avari kuita zvinhu zvese mukuvhurwa, yast inoshanda chaizvo, chaizvo, zvaive nyore kwandiri kurodha zvimedu zvemitauro yesystem uye kurodha pasi software yandinoda kugadzirirwa mukati Yangu PC. kumutsiridza kuri nyore zvakare futi, zvakare tarisa pamhepo pamatanho ekuti ungadzime sei mafaera echinguvana uye maitiro ekushandisa yast kubva kunyaradzo. Ndiri kunyatsoshandisa openuse kwenguva yakareba.
Kwete chete yekutaura, ini ndinosiyawo iyi kero:
http://geeksroom.com/?s=opensuse+ Inoumbwa nemavhidhiyo manomwe muFvv fomati, uko hunhu hweyakavhurikaSUSE inotsanangurwa kubva pakuiswa kwayo, kune mimwe misoro senge yekuchengetedza repositori, kubata ruzha, kurongedza keyboard uye nezvimwe zvakawanda, unakirwe.
Damn, akawanda akanaka makomendi pano uye pane yakavhurikaSUSE webhusaiti iri kundiyedza kuti ndiyedze .. Mwari, musandirega ndichiedzwa, musandirega ...
xD tentate, tende menyu 😛 Ini ndinogona kutaura kuti iyi distro ndeimwe yeakanakisa mune ese mativi xD ndakaisa mwedzi wapfuura iyo vhezheni yakaburitswa gore rapfuura sezvo ini ndaive nayo kare kare pane iyo dvd xD vhezheni 12.1 iyo yandakawedzerawo Tumbleweed repos kuti iite rolling distro asi panguva imwe chete yakanyatsogadzikana lol uye kana iyi vhezheni vhezheni ichangobuda muchoto, iwe unongoda kuita dup zipper mune terminal uye ndiri kutonakidzwa neshanduro nyowani pasina dambudziko uye chakanakisa chinhu kuti hapana kunetsana pane zvese zvinoenderana hehehej yakafanana nesuse iyo kana uchishandisa bazi rino inokuita iwe mhando yekudzoserwa kwakazara kwesisitimu asi pasina kurasikirwa chero xD
hehehehe kana ini ndikaedzwawo kuti ndiise iyi vhezheni vhezheni, ndiri pa fedora 17 uye ini handidi kusiya fedorita yangu asi ndinonyatsoedzwa, OpenSUSE inzvimbo yakanaka kwazvo.
hei aza, chokwadi ibhuku rakazara kwazvo uye ini ndinoona kuti vanokubata kumeso, chokwadi chinoratidzika kwandiri kuti opensuse idistro iyo ingave yakakodzera kuyedza asi iwe unoziva kuti handikwanise kuisa usb kurarama zvakanaka: / rombo ndicharamba ndichiedza 😛 pamwe nekuisa kwandakaita iyo mindi ini ndinogona neiyo openuse 😀
Pindura kune dctrasher
hehej grax varume vanopfuura xD, nenyaya iyo yataitove tichikurukura paFB iyo yausingakwanise kuisa suse pane usb ._. Pamwe kuburikidza nenharaunda ino vanogona kubatsira, ini handizive zvakawanda nezve usb sezvo ini ndichigara ndichirekodha pama cd kana maDVD, ayo kwandiri ari akasununguka nenzira iyoyo xD
Iko kunakidzwa kubatsira, ndizvo zvaDesdelinux, ndirikukupa iyi URL: http://es.opensuse.org/Portal:Instalaci%C3%B3n , kwavanotsanangudza zvakadzama nzira yekuisa OpenSUSE kubva kuUSB.
Kugadziridza yakavhurikaSUSE 12.1 pamhepo kune iyo nyowani vhezheni 12.2 otomatiki unogona kubvunza ichi chinyorwa:
Ndiri kuiyedza uye ndinongova nerumbidzo. Inokurumidza uye yakasimba. Ini ndatoisa KDE 4.9.1 pairi 😉
kambasi !!! distro irikuenda sei mu lxde nharaunda?
Vhidhiyo yeSUSE ine LXDE yakakosha mazwi chiuru, heino URL: http://en.opensuse.org/LXDE.
Kana iri SUSE yakafanana nehunhu.
Ini ndinobvumirana nezvose zvakataurwa, chokwadi ndechekuti yakanaka kwazvo distro.
Ndakaiisa mu pc yandakabatanidza pamwe yemunhu aisaziva chero chinhu nezve komputa uye akazojaira ipapo ipapo (hehe ini ndinopinda mukombuta kuburikidza nerutivi rwuno uye kwete rima).
Ini ndaida kuyedza pane yangu pc asi pakanga pasina nzira yekuti ndione kiredhiti kadhi, pakupedzisira ndakaisa Mint 13 Kde uye zvinofamba zvakanaka.
Pamwe gare gare ndichaedza Opensuse zvakare nekuti ndaizvida zvakanyanya.
lawliet @ debian akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti ndeimwe yeakanakisa distros, asi zvinondishamisa kuti muDebian inoenda nekukurumidza, sezvo izvozvi zvese zvinoshanda mushe handioni kuti nei ndadzokera kuOpenSUSE.
Kana ndiine hard drive nyowani kana komputa nyowani ndinoiisa.
Rutivi rwakanaka nderkuti ndinaro palaptop uye ndiri kuenda kunorivandudza kusvika 12.3
Izvo zvandisinganzwisise ndosaka vasina kushambadza chitsva posvo yeOverSUSE 12.3
Pindura ku lawliet @ debian
Yakanyanya kusagadzikana pabasa, ini ndaifanira kuisa debian kumashure. Kunze kweizvozvo ini ndaisada zypper zvakanyanya ... Pamwe hazvina kushata kumba.
App nyowani: Inopfupisa. Nzira iri nyore yekupfupisa ma URL
Bvisa duplicate mitsara kubva mufaira